"Kwemihosha ezintathu" - akuyona nje enkulu amandla kagesi emhlabeni, kodwa futhi amaShayina eyingqopha kazwelonke, okuyinto izivakashi eziningi ezivela emhlabeni wonke. I Hydro ngobukhulu ngokufanele ngomlomo emfuleni umfula iYangtze, kwakhiwa ukwenza imisebenzi emithathu eyinhloko - kagesi amandla isizukulwane, ukulawula uzamcolo, kanye ngcono nge-navigation. Ukwakhiwa kwalesi sikhungo waqala ngo-1994, futhi eminyakeni eyisishiyagalolunye kamuva esiteshini eseqala ukuveza ugesi kuqala. Ngo-July 2012, wonke umsebenzi wokwakha usuphothuliwe, okwathi ngemva kwalokho elikhulu amandla kagesi emhlabeni wafakwa ngokusemthethweni ukusebenza.
Ngesikhathi ukuphakama edamini ifinyelela 185 metres uphinde uthele kancane uyakwazi kudlule zonke 116.000 cubic metres lamanzi lesibili. Inombolo ephelele amayunithi wokubacindezela ilingana amathathu nane. Amandla ngamunye megawatts ezingamatshumi amathathu lambili 700, kanye asele amabili (babevamise ukuba ngumnikazi izidingo into) - 50 megawatts. Umthamo isamba "kwemihosha ezintathu" kuyinto 22.5 GW. Njengoba for isizukulwane wamandla kagesi, elikhulu kunawo wonke amandla kagesi ulakho ukukhipha ngonyaka yikhulu bhiliyoni kilowatt-amahora. Kuyathakazelisa ukuthi abaklami ekuqaleni kuhlelwe ukuthi esiteshini uyonika omunye kwabayishumi amandla Imininingwane eChina. Kodwa kuze kube manje eyathatha ukwakhiwa sikhungo, izidingo kuleli zwe zandile kakhulu, futhi manje amandla okunika lowo mdondoshiya amandla kagesi, Mibili kuphela amaphesenti angu-ingqikithi.
Kufanele kuqashelwe ukubaluleka okukhulu kwe-amandla kagesi ngesikhathi izikhukhula. Ngokomlando, ukuthi lezi zinhlekelele ezingokwemvelo sibe ngoba inani labantu baseChina kuyinto inkinga engathí sina kakhulu ngoba njalo ngonyaka Zithwala inqwaba izimpilo zabantu. Kule ndaba, le River umfula iYangtze manje esakhiwayo kubangela eziyinkimbinkimbi kwamadamu okugcina amanzi. Ngaphezu "Three kwemihosha" yakhe kuyinto emifula power plant "Gezhouba", elakhiwa e-1988. Ngaphezu kwalokho, iziteshi eziyisikhombisa ukuthi njengamanje esigabeni ukwakhiwa. Umhlangano omkhulu kunayo yonke Hydropower isitshalo emhlabeni has a ichibi nge namandla 20 cubic amakhilomitha. Ngokungangabazeki, kuyoba kakhulu ukunciphisa umthelela yonyaka entwasahlobo kukazamcolo. Kufanele kuqashelwe ukuthi uma zingekho kwesigubhu Hydropower iba kuncike izinga lamanzi emfuleni. Phela, njengoba amandla ayo ongaphakeme is kakhulu ziyancipha. Futhi uma uzamcolo iningi meltwater ukusetha kabusha idling.
Hydroelectric amandla plant "kwemihosha ezintathu" itholakala endaweni olunothile phakathi emizini Yichang futhi Chongqing. Kule ndawo kukhona eziningi ezikhangayo engokwesiko. Ngenxa okwakhe lathumela, elikhulu kunawo wonke amandla kagesi emhlabeni, elika "Pearl of the River umfula iYangtze." Ngaphezu kwalokho, isithakazelo esikhulu abantu njalo ukuthi kungenzeka inqubekela-phambili yesayensi nezobuchwepheshe, akumangazi ukuthi kungcono "kwemihosha ezintathu" baqala ukuthola ithandwa enkulu phakathi izivakashi ngisho ngesikhathi kwakhiwa.
Kepha imidondoshiya yasekhaya, kwekulu emifula power plant eRussia - kungcono Sayano-Shushenskaya. Naphezu kweqiniso lokuthi umthamo wayo wamemezela 6.400 megawatts, kuthatha kuphela lwesikhombisa ukuthi amazinga emhlabeni e. Ngaphezu "kwemihosha ezintathu" in the ezintathu eziphezulu kuhlanganisiwe ezifana amandla kagesi njengoba Brazilian-Paraguay "Itaipu" (14.000 MW) kanye giant emifula Venezuela - "Guri" (10.2 megawatts).
Umshini ulwelwesi cindezela. Izinsiza kusebenza for yokukhiqiza of ifenisha izingcezu
Promotion umsebenzi: umqondo kanye nezinhlobo ukukhuthazwa